10 Qof oo ku dhimatay dagaal Beeleed maanta ka dhacay Bangeelle oo tirsan Caabudwaaq. – Radio Daljir
10 Qof oo ku dhimatay dagaal Beeleed maanta ka dhacay Bangeelle oo tirsan Caabudwaaq.
Janaayo 14, 2020 5:33 g 0
Inta la hubo 10 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed maanta la dhacay miyiga tuulada Bangeelle oo ka tirsan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Wararka qaar ayaa tirada dhimashasa iyo midda dhaawacaba intaas ka badinaya, waxaana gabbal-gaabkii galabta garoonka diyaaradaha ee Caabudwaaq diyaarad laga saaray 7 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo 6 ka mid ah diyaaraddu ay ka soo qaaday Cadaado, halka qofka kalana laga qaaday Caabudwaaq.
Dagaal beeleedkaas maanta ka dhacay Bangeelle ee dhimashada iyo dhaawaca sababay, ayaa u dhaxeeyey mellayshiyaad beeleeddo ka soo kala jeeda Caabudwaaq iyo Cadaado.
Dagaalkaan ayaa salka ku haya dekanooyin qabiil iyo kala shaxeexaysi xagga daaqa iyo deegaanka ah, waxayna ahayd bishii hore markii sidaan oo kale halkaadi dagaal uga dhacay, hase ahaatee waanwaano nabadeed oo sameeyey ayaa horay xaalka loogu qaboojiyey, inkasta oo ay hadda soo cusboonaatay.
Golaha Aqalka Sare oo Ansixiyay sharciga Saxaafadda Soomaaliya